Al-Shabaab oo qorsheynaya weeraro ka dhan ah Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Al-Shabaab oo qorsheynaya weeraro ka dhan ah Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya
Xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa qorsheynaya weeraro ka dhan ah Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya, kadib war qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africom.
Warka ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in weerarada ay qorsheynayaan Al-Shabaab uu yahay aar-gudasho ka dhalatay duqeymaha Mareykanka uu ku dilay Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab.
Taliska Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadooda ay is difaaceen, markii weerar lagu soo qaaday 21-kii bishan, sida lagu yiri qoraal soo baxday 23-kii bishan.
Illaa 50-askari oo ciidamo Mareykan ah ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo xaga tababaraya iyo la talinta ka taageeraya Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay la kulmay dharbaaxooyin, kadib markii weeraro ay fuliyeen diyaaradaha Drones looga dilay dhowr hogaamiye.
In ka badan 10-ruux oo ku geeriyootay qarax miino ka dhacay duleedka Muqdisho (Sawirro)
Wasiirka warfaafinta Maareeye oo ka hadlay bayaan ay soo saareen hay’ada culumada Soomaaliyeed